अन्तर्वार्ता Archives - Page2of2- तितोपाटी
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेरपनि सर्मनाक हार बेहोरेको राप्रपा प्रजातान्त्रिक मूल राजनीतिक प्रवाहबाहिर रहेको छ । कमजोर अवस्थामा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको आगामी रणनीति, एजेण्डाका साथै समसामयिक विषयमा केन्द्रीय रहेर पार्टीका महामन्त्री सुनील थापासँग फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः राप्रपा प्रजातान्त्रिक मूल राजनीतिक धारबाट बाहिरिएको छ…
लालबाबु पण्डित, नेपाली राजनीतिमा एउटा लोकप्रिय नाम । उनले यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छदा गरेका काम कारण उनी चर्चित मात्रै भएनन् सम्मानित नेताका रुपमा स्थापित पनि भए । त्यही कारण यस पटक पनि उनी मन्त्री भए । सुरुमा वाताबरण मन्त्री बनेका लालबाबुले वाताबरण सफाई अभियान चलाएर उसैगरी । काठमाडौंलाई मास्कमुक्त…
तितोपाटी डट कम - सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरेसँगै राजनीतिमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रायःले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने तराई मधेशमा कतै–कतै यसको आलोचना पनि भइरहको छ । प्रदेश २ मा सरकार बनाएको फोरम नेपालले केन्द्रमा सहभागी भएपछि प्रदेश…
‘अधिनायकवाद आयो भने ६ महिनाको पाहुना हुनेछ’ -पुर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
तितोपाटी - संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष भयो। गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा जनताका छोरा पुगे। त्यो पहिलो सौभाग्य नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादवले पाए। दुई वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका यादवले सात वर्षभन्दा लामो समय राष्ट्रपतिको भूमिका…
बजेट भालुलार्इ पुराण सुनाए सरह – पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टरार्इ
तितोपाटी - पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटमार्फत टिप्पणी गरे । ट्विटमा उनले लेखे, ‘बजेट सुन्दै जाँदा माछा माछा, भ्यागुता जस्तो पो अनुभूति भयो । बजेट सबै हिसाबले पुरानैको निरन्तरतामा आयो । जबकि आवश्यकता समृद्धिको युगतर्फ फड्को हान्ने संरचनात्मक परिवर्तनको थियो । त्यो…
नेपाललार्इ गुणस्तरिय शिक्षाको हब बनाउँछाैं – प्रधानमन्त्री अोली
तितोपाटी - शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी, निजी, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट बर्सेनि अर्बौं लगानी भइरहेको छ । तर लगानीअनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको गुणस्तर अपेक्षित रुपमा सुुध्रन सकेको छैन । निजी र सरकारी शिक्षालयहरुको गुणस्तरको खाडल गहिरिँदो छ । शिक्षा क्षेत्र चरम राजनीतीकरणको चपेटामा परेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय तह अध्ययनका…
नेपालको परराष्ट्र मामिलामा संघिय सरकार मात्र जिम्मेवार
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २५ सय किताब पनि छन्। अध्ययनशील स्वभावका ज्ञवालीको पुस्तकालयमा अचेल परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लिटरेचर थपिन थालेका छन्। २०६३ पछि शान्ति प्रक्रियाका क्रममा केन्द्रीय भूमिकामै रहेर विदेशीसँग उठबस बढेपछि उनको रुचि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले तानेको थियो। घरेलु राजनीतिका विषयमा त उनी पहिलेदेखि नै…